CGI manaraka ny LFR 2021
Kaody ankapobeny momba ny hetra 2021
CGI araka LFR 2020
Hetra amin'ny tsenam-bolam-panjakana (IMP)
Art. 01.01.44.- Apetraka ny hetra amin’ny famatsiam-bolam-panjakana, alaina ho tombontsoan’ny tetibola ankapoben’ny Fanjakana. misolo tena sy manafaka amin'ny hetra amin'ny fidiram-bola sy ny hetra synthetic. Ny fepetra momba ny fandoavana vonjimaika, ny fanangonam-bola kely indrindra, ny fampihenana ny fiampangana, ny fampihenana ny hetra, mifandraika amin’ireo hetra ireo dia tsy azo ampiharina amin’ny famaritana ny hetra amin’ny fifanarahana ara-panjakana.
Araka ny lalàna momba ny vola tamin'ny voalohany 2021, Tohiny
... Ireo fanambarana ara-bola voalaza etsy ambony ireo dia tokony hambara amin'ny sehatra an-tserasera natokana ho amin'ny fametrahana fanambarana ara-bola ihany koa. Ny fepetra fampiharana ity fepetra ity dia apetraky ny lahatsoratra mifehy ...
Andininy 20.05.01.- Ny laharana fisoratana anarana momba ny hetra an-tserasera dia atokana ho an'ny olona voajanahary na ara-dalàna ary koa ho an'ireo izay manana orinasa maharitra eto Madagascar izay azon'ny hetra habaina ao ny hetsika, fananany na fidiram-bolany. haba, omen'ny fehezan-dalàna. Tohiny